Isicwangciso sendlela yokutya enesondlo - South Africans with Diabetes
Ingaba uyazibuza ukuba ungatya ntoni njengoba ngoku uphila nesifo seswekile? Awuqinisekanga ukuba kokuphi ukutya okuzakulungela iswekile yegazi lakho? Nangona kusoloko kulungile ukudibana nogqirha wezidlo ukufumana iingcebiso ezenzelwe umntu ngamnye, zikhona izikhokhelo ngokubanzi ezingakunceda ukuba wonwabele indlela yokutya uphila nesifo seswekile. UPick n Pay wenze isicwangciso sendlela yokutya engakunceda ukuba wenze kanye loo nto.
Isicwangciso sendlela yokutya enesondlo xa unesifo seswekile
Qaphela: Wonke umntu wahlukile kwaye uzakuphendula ngokwahlukileyo ezindidini zokutya. Umzekelo, abanye abantu abanesifo seswekile bangazitya iziqhamo ngomlinganiselo, nangona kwabanye ingenyusa iswekile yabo ibheke phezulu kakhulu. Jonga iswekile yakho yegazi rhoqo kwaye ukhethe ukutya okuwulungeleyo umzimba wakho kunye nokulawula iswekile yakho yegazi.
Umlinganiselo wokutya ubalulekile
Kwakhona kugcine engqondweni ukuba ubalulekile umlinganiselo wokutya. Nokuba uyawubalabala okanye hayi umlinganiselo wesitatshi, kuyafuneka ukuba uqinisekile ukuba icala lesitya sakho linemifuno eluhlaza enezongo, nesixanyana sesitatshi esinefayibha ephezulu engacolwanga (unrefined fibre) kuquka iziqhamo ,nesiqingatha seprotini engenamafutha. Nasi isicwangciso sendlela yokutya onokusebenzisa njengendlela yokuqala. Ungadawunilowuda iindlela zokupheka apha ngezantsi.
Khuphela esi sicwangciso sokutya
Ufuna ukuziprinta uzozisebenzisa kakuhle? Cofa u”Download” kweli qhosa lingezantsi. Zonke iindlela zokupheka izidlo ezikhankanywe kwesisicwangciso zikhona apha ngezantsi.Sicela usixelele ukuba ucinga ntoni ngazo!
Dawuniloda isicwangciso sezindlo ezisempilweni
Dawuniloda isicwangciso sendlela yokupheka
Umnxeba wezempilo wakwaPick n Pay
Ubusazi na ukuba uPick n Pay uqasha ugqirha wokutya abhalisiweyo ukuze anikeze ngeengcebiso zamahala zendlela yokutya eluntwini? Qhakamshelana nabo ngomnxeba ku 0800 11 22 88 okanye ubathumelele i-imeyile ngqo kuhealthhotline@pnp.co.za ukuqala inkcoko ngendlela yokutya.
[…] isifo seswekile? Yintoni udidi lokuqala nolwesibini lwesifo seswekile? Isicwangciso sendlela yokutya enesondlo Iingcali zesifo seswekile ezigqwesileyo eMzantsi Afrika Indlela yokutya esempilweni yabanesifo […]